DHAGEYSI XASAASI AH: Jamhada ONLF oo ka hadashay wada hadalada ka socda magaalada Nairobi, si adagna u diiday warar soo baxay – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Masuul ka tirsan xisbiga UCID oo fashiliyey siraha Muuse Biixi & Arin aanan la filayn oo banaanka timid 13 mins ago
Home 2018 February Wararka Maanta DHAGEYSI XASAASI AH: Jamhada ONLF oo ka hadashay wada hadalada ka socda magaalada Nairobi, si adagna u diiday warar soo baxay
DHAGEYSI XASAASI AH: Jamhada ONLF oo ka hadashay wada hadalada ka socda magaalada Nairobi, si adagna u diiday warar soo baxay
NAIROBI(P-TIMES)- Wada hadalada hogaamiyaasha ONLF iyo dawladda Itoobiya ayaa ka socda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxayna salka ku hayaan arrimaha ku aadan sidii nabad loogu heli lahaa gobalka Soomaalida, waxaana xooga la saarayaa hubka oo la dhigo iyo qorshaha nabadda.
Afhayeen u hadlay ONLF oo kusugan dalka dibadiisa ayaa u sheegay mid kamid ah Idaacada caasumada Soomaaliya ee Muqdisho, in aysan jirin cid kasta Ismaamulka Soomaalida oo ay la hadlayaan.
Cabdulqaadir Sheekh Xasan Mooge ayaa sheegay in uu ku yimid wada hadalkan markii ay Itoobiya garowsatay ayuu yiri xaqiiqada dagaalka ay kula jirto ONLF, ayna hadda codsadeen wada hadalkan.
Mr, Hirmooge wuxuu cadeeyey in ay wada hadaladu wali yihiin curdan, ayse rajeynayaan in miro wanaagsan ka soo baxayaan, iyadoo diiradda la saarayo dhinacyada waxyaabaha ay isku hayaan.
ONLF waxay sheegtay in ay hadda xooga saarayso qorshaha soo deynta Maxaabiis badan oo ku jira Xabsiyada ammaanka aadka loo ilaaliyo ee ay maamusho dawladda Itoobiya, ayna yihiin qodobada ugu adag ee ay isku hayaan labada dhinac.
Shalay ayuu bilowday wada hadalada rasmiga ah, waxaana la rumeysan yahay in wakiilo si toos ah u matalaya Raysalwasaaraha dalka Itoobiya ay kusugan yihiin magaalada Nairobi, waxaana shirka qeyb weyn ka ciyaaraya Siyaasiinta deegaanadaas u dhashay ee diblumaasiyada caalamiga ah qeybta ka ah.
Puntlandtimes waxay shalay baahisay warbixin ka hadlaysa wada hadalka cusub iyo waxyabaha laga filan karro, gaar ahaana qodobada adag ee ay dhinacyadu wajahayaan oo ay arrimaha maxaabiistu yihiin kuwa ugu waa weyn.
WARBIXIN CUSUB: ONLF & Itoobiya oo wada hadalo xasaasi ah uga socdaan magaalada Nairobi, Maxaase laga filan karaa, Yeyse dan ugu jirtaa?